By vachivhura Website yedu uchibvuma kuti Terms yedu Use
Uchishandisa Website redu panguva yako hatiripe. Kushandiswa yedu kugutsikana zvinoitwa mugamuchirwe kungwara uye ngozi uye kuti iwe uchava kungovimba basa chero kukuvara wako yekombiyuta kana kurasikirwa date unobva mashandisirwo kwedu kugutsikana. Unonzwisisa kuti Website yedu haisi mhosva chero zvakananga kana zvisina kunanga kukuvadzwa.
Hapana kugutsikana anoratidzwa yedu yepaIndaneti iri maiva pamusoro servers dzedu.
Tiri kwete mutoro wechitatu-vebato Websites zvakabatana kana kutaurwa website yedu.
You havabvumirwi nohwake kana Upload kugutsikana kwedu kwese. Unogona chete kurishandisa pachake uye vasiri vezvokutengeserana kushandiswa. Unogona handizozvichinji injiniya kana de-kuronga chero yedu tigutsikane chero nzira. The anogutsikana inowaniswa chinangwa chedzidzo chete.
Hapana chinoratidza kuti kugutsikana website yedu. Zviito zvenyu zvose anoteererwa mugamuchirwe ungwaru.
Our kugutsikana mushandisi-akasika zvinoumbwa zvinangwa yedzidzo vasiri wezvokutengeserana uye non-mubereko.
You havabvumirwi kushandisa kugutsikana edu pamutemo servers kutyora mashoko avo kushandiswa. Iwe tora basa zvizere nokuita kudaro.
Unogona kushandisa chero website uyu kugutsikana pasina kubvumirana kubva Mudzviti. Kana ukaita kushandisa Website vedu kugutsikana pasina nemukuru mvumo, iwe achava akafanirwa chero kwakonzerwa kushandisa.
All akabvuma muenzi romukova kana basa ichava yedu pfuma pamutemo. Ucharasikirwa kodzero dzose kuti nyaya. Tine kodzero pashure pambiru chero pasina ziviso.
Blog ino akasikwa kuti chinangwa chedzidzo chete.
Hapana faira hosed pamusoro server isu zvachose sepasisina pamusoro pavo.
trademarks vose Copyright zvavo dzazvinogara pavanatenzi.
The arun kwakachengetwa kodzero pashure zviri aya chero nguva, pa maonera yedu.